နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက် / အိန္ဒိယတွင်နယူးအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာ
27/01/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အိန္ဒိယတွင်သစ်ခုံသမာဓိဗဟိုချက် Gurugram ၏အိန္ဒိယမွို့၌ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်, ရုံအနောက်တောင်ဘက်နယူးဒေလီအနေဖြင့်တည်ရှိပြီး.
အခုအသစ်ခုံသမာဓိဗဟိုချက်များအတွက်ပဏာမခြေလှမ်းဟာပန်ဂျပ်နှင့် Harayana တရားရုံးချုပ်မှ လာ.. ရှည်ရှည်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အစိုးရခွင့်ပြုချက်ကြောင့်ပေမယ့်ဒါဟာစစ်ဆင်ရေးဖြစ်လာသည်နှစ်အနည်းငယ်ယူစေခြင်းငှါ,, ဒါကြောင့်အိန္ဒိယအတွက်ခုံသမာဓိရာသီဥတုများအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ပါသည်.
အသစ်ကအလယ်ဗဟိုများအတွက်ပဏာမခြေလှမ်းဟာနောက်သို့လိုက်ကြ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်များအတွက်မွန်ဘိုင်းစင်တာမကြာသေးခင်ကဖွင့်လှစ် (MCIA) အောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးနှစ်တွင်.
အတော်များများအိန္ဒိယနှစ်ပေါင်းများစွာ operating ခဲ့ကြရာအခြားသောခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိထားမဟုတ်. အသက်အကြီးဆုံးအနုညာတစီရင်၏အိန္ဒိယကောင်စီဖြစ်ပါသည် (နှင့် ICA), စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1965, နယူးဒေလီမြို့၌ရုံးများနှင့်အတူ, အရာနှစ်ဦးစလုံးဟာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိ administrates.
တစ်ဦးကစက္ကန့်လူသိများခုံသမာဓိဗဟိုချက်ကတော့နာနီ Palkhivala အနုညာတစီရင်ရေးစင်တာဖြစ်ပါသည်, စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2005, ချင်နိုင်းအတွက်ရုံးများနှင့်အတူ (ဒ). တစ်ဦးကတတိယ, နည်းလူသိများအဖွဲ့အစည်း, နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာဖြစ်ပါသည် (IDAC), Vardadara အတွက်မှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းမွန်ဘိုင်းရုံးများနှင့်အတူ, နယူးဒေလီနှင့်ချင်နိုင်း.
တစ်ဦးအပြုသဘောခုံသမာဓိရာသီဥတုနှင့် operating ခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြား၏နံပါတ်နေသော်လည်း, ဒေတာအိန္ဒိယပါတီများနေဆဲစင်္ကာပူမှာတည်ရှိပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိစင်တာများပိုနှစ်သက်ဟန်ကြောင်းအကြံပြု, လန်ဒန်နှင့်ပဲရစ်.
အိန္ဒိယအစိုးရသည်အိန္ဒိယကိုနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုဦးတည်ရာကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော adjudication ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဦးတည်ရာကိုရစေ.
ဒါကထိုက်တန်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်, ကကောင်းစွာအိန္ဒိယတရားရုံးစနစ်ကိုဆိုးရွားစွာ backlogged ကြောင်းလူသိများသည်အဖြစ်, အများအပြား States မှာတရားသူကြီးတစ်ဦးလျှင်ဖြစ်ပွားမှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏နဲ့အတူ. ဂူထဲမှာ, ဥပမာ, အကြောင်းကိုတဦးတည်းလေးအတွက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသတင်းများအရဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အားဖြင့်နှောင့်နှေးနေသည်. အိန္ဒိယအစိုးရသည်၎င်း၏တရားရုံးစနစ်ကပြုပြင်စီမံခန့်ခွဲအချိန်အထိ, ခုံသမာဓိအချိန်အထိခိုက်မခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များကိုရည်မှတ်အငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးဖြစ်ပါသည်.
အစိုးရအိန္ဒိယသူ့ဟာသူစစ်မှန်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိဗဟိုချက်ဒေသခံခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားဖွငျ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခုံရုံးအောက်မှာခံစားရတဲ့နစ်နာမှုတွေကိုရှာအိန္ဒိယတွင် operating ကုမ္ပဏီတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်စေရန်စီမံခန့်ခွဲကြလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်.
မည်သည့်ဖြစ်ရပ်အတွက်, အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝနျထမျးတရားရုံး system ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယတွင်တစ်ဦးချင်းစီသစ်ကိုခုံသမာဓိစင်တာဖွင့်လှစ်မယ့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ပါသည်.
– နီနာတစ်ဦးက. Jankovic, Aceris ဥပဒေ SARL
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ညီလာခံ, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အိန္ဒိယအနုညာတစီရင်